Toriteny alahady 11 mey 2014 | FJKM Amboniloha
Toriteny alahady 11 mey 2014
“….Fa Jesosy niantso azy hanatona Azy ka nanao taminy hoe: Fantatrareo fa izay eken’ny jentilisa ho mpanapaka dia mampanompo azy, ary ny lehibeny dia mifehy azy. …’ Marka 10 : 42
Miantso antsika mba hifampidinika Aminy ny Tompo amin’ny alalan’izao toriteny izao.
Inona ary hoy ianao no zavatra tiany ampahafantarina ?
1- Mampahafantatra ny Tompo fa tsy raharaham-pianakaviana ny asan’Andriamanitra ka itadiavana tombon-tsoan’ny kin-trano an-trano.
Jakoba sy Jaona dia fianakaviana akaiky an’I Jesoa. Nihevitra izy mirahalahy ireo fa amin’ny maha mpirahalahy azy amin’ny Tompo dia nagatahiny ny mba hipetraka eo an-kavanana sy an-kavian’I Jesoa rehefa rahatrizay ao amin’y fanjakan’ny lanitra. Nambaran’i Jesoa mazava tamin’izy mirahalahy ireo fa tsy anjarany ny mametraka azy amin’izany toerana izany fa ny Ray izay any an-danitra .
Lesona : Ny fahazoana toerana ao amin’Andriamanitra dia miankina feno amin’ny fanompoana atao amin’ny fanetren-tena sy ny finiavana hanatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra. Ny fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra ihany koa no mametraka anao ho isan’ny fianakaviana akaiky an’I Jesoa cf Marka 3 : 35 “Fa na iza na iza no manao ny sitrapon’Andriamanitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko” antoka ahazoana ny toerana tsara ao amin’ny fanjakan’ny lanitra.
2- Tsy toeram-boninahitra ny ho eo an-kavanana na an-kavian’ny Tompo
Ny olona manaraka ny Tompo dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana ; ny zava –misy anefa dia feno fitiavan-tena ny Kristiana ankehitriny satria ao anatin’ny fanarahany ny Tompo dia ny hisondrotra amin’ny voninahitra no tena katsahiny, hany ka tsy mahalala izay tokony angatahiny manjary manaonao foana. Ilay Andriamanitra ivavahana dia manjary Andriamanitra irakiraka ,(ambeno ny tananany , omeo vola izahay , tahio ny asanay , sitrano , sns…..) tsy ratsy akory ny mangataka izany fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe : manao ahoana ny Kristiana sy ny fifamatoram-piainany amin’Anbdriamanitra ?
Lesona : Mampianatra ny Tompo hoe aoka tsy ho amin’ny fitiavan-tena na filan-javatra no ivavahana, aoka tsy filan-dera no hanompoana an’Andriamanitra. Meteza ho andevon’ny Tompo amin’ izay baikony rehetra , tsy ny ialana ao anaty olana ; na ahazoana izay ilaina no mahamaika fa ny ahavaitanao tsara izay zara fanompoana napetraka taminao .
3- Tsy mitovy ny fanao eo amin’izao tontolo izao sy ny fanao ao amin’Andriamanitra
Lasa aretina ny fitadiavam-boninahitra eo amin-draolombelona ary na dia ny Kristiana aza dia voampentimpetin’izany toe-tsaina tsy mahomby izany , ka ny fanoloran-tena ho an’ny Tompo dia iandrandrana fanambonian-tena indraindray. Ny fiheveran-tena ho zavatra manoloana ny asa fanompona dia mety hanary izay miaina izany ho any amin’ny helo.
Lesona : Ny olona manompo amin’ny fanetren-tena sy ny fahatahorana an’Andriamanitra dia mizara fiainana , ny olona tsy manompo, na koa manompo fa manao izany ho filan-javatra no antsoina hoe mizara fahafatesana .
Hafatra : Ry Kristiana havako , fantatro manomboka anio ary , fa fananan’ny Tompo isika satria efa novidiany lafo tamin’ny ràny , izay rehetra momba antsika dia Azy , ary ananany fahefana feno. Meteza ho mpanompo manetry tena, tanteraho y fanompoanao fa hoy teny fampanantenana omen’ny Tompo anao izay mandray izao fampianarana izao : “Ataoko miavaka ny manompo Ahy sy ny tsy manompo Ahy”
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra .Amen ! ,
LAZANDRAINY Martin , Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 13 mai 2014